साइम्बल्टा बनाम एफफेक्सोर: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम हो - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
घरपालुवा जनावर कम्पनी, चेकआउट औषधि जानकारी मनोरञ्जन स्वास्थ्य कम्पनी, समाचार प्रेस स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर औषधि जानकारी, समाचार समुदाय, कल्याण औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, औषधि जानकारी
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> साइम्बल्टा बनाम एफफेक्सोर: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम हो
साइम्बल्टा (ड्युलोक्सेटीन) र एफिएक्सोर (भेन्लाफैक्सिन) ब्राण्ड-नामक औषधी हो जुन मनोवैज्ञानिक स्थितिको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ जस्तै डिप्रेशन र चिन्ता। तिनीहरू सामान्यतया एन्टीडिप्रेससन्टको रूपमा सल्लाह दिइन्छ जुन ठूलो डिप्रेशन डिसआर्डरको लक्षणहरू कम गर्न मद्दत गर्दछ। प्रमुख उदासीनता विकार को लक्षणहरु मा लगातार उदासी र दैनिक गतिविधिहरु मा चासो को एक गंभीर हानि शामिल हुन सक्छ।
सिम्बाल्टा र एफफेक्सोर दुबै सेरोटोनिन र नोरेपाइनफ्रीन पुनःअपटेक इन्हिबिटरहरू (SNRIs) भनिने ड्रग्सको वर्गसँग सम्बन्धित छ। तिनीहरू दिमागमा सेरोटोनिन र नोरिपाइनफ्रिनको उपलब्धता बढाउँदै काम गर्छन्। यी रसायनहरू, वा न्यूरोट्रान्समिटरहरू, मानसिक स्वास्थ्य विकारहरूको घटनामा भूमिका खेल्ने विश्वास गरिन्छ।
यस तुलनाको उद्देश्यका लागि, नाम एफएक्सोरले एफफेक्सर एक्सआरलाई पनि संकेत गर्न सक्दछ, केवल ब्रान्ड-नाम एफफेक्सोर हाल मार्केटमा उपलब्ध छ।
सिम्बाल्टा र ईफेक्सोर बीचको मुख्य भिन्नता के हो?
साइम्बल्टा डुलोसेटिनको लागि ब्रान्ड नाम हो। यो मौखिक ढिलाइ-रिलीज क्याप्सूलको रूपमा उपलब्ध छ २० मिलीग्राम, mg० मिलीग्राम, वा mg० मिलीग्राम। यो सामान्यतया उपचार गरिदै गरेको अवस्थाको आधारमा दैनिक एक पटक मुखबाट एक क्याप्सूलको रूपमा गरिन्छ। अधिकतम खुराक प्रति दिन १२० मिलिग्राम हो यद्यपि कुनै प्रमाणहरू छैनन् जुन खुराक mg० मिलीग्राम भन्दा बढी लाभ मा एक उल्लेखनीय वृद्धि प्रदान गर्नुहोस्।
सिम्बल्टाको आधा जीवन लगभग १२ घण्टा छ। यो मुख्यतया जिगर र मिर्गौला मार्फत मेटाबोलिज्ड र हटाइन्छ। गम्भीर कलेजो वा मृगौला कमजोरी भएकाहरूमा यसको प्रयोगबाट टाढा रहनु पर्छ।
ईफेक्सोर भेन्लाफैक्सिनका लागि ब्रान्ड नाम हो। जे होस्, ब्रान्ड-नाम एफफेक्सोर केवल एफफेक्सोर एक्सआर, वा भेन्लाफ्याक्सिन विस्तारित-रिलीज ट्याब्लेटहरूको रूपमा उपलब्ध छ। तत्काल रिलीज एफफेक्सोर बन्द गरिएको थियो किनभने यसलाई दिनभरि धेरै चोटि डोज गर्नु आवश्यक पर्दछ र विस्तारित रिलिज संस्करण भन्दा धेरै मतली पैदा गर्दछ।
एफिएक्सोर एक्सआर oral 37..5 मिलीग्राम, mg 75 मिलीग्राम, र १ 150० मिलीग्रामको साथ मौखिक क्याप्सुलहरूमा आउँदछ। Dosing उपचार गरिरहेको अवस्थामा निर्भर गर्दछ। जे होस्, एफफेक्सोर एक्सआर सामान्यतया दैनिक एक पटक taken 75 मिलीग्रामको दैनिक खुराक र अधिकतम दैनिक डोज २२ 22 मिलीग्रामको साथ लिइन्छ।
सिम्बल्टा जस्तै, एफिएक्सोर कलेजोमा मेटाबोलिज हुन्छ र यसको कुल आधा जीवन हुन्छ ११ घण्टा सम्म । यदि कम्ती खुराक लिईन्छ भने यकृत वा मिर्गौला बिरामी भएकाहरूमा यो प्रयोग गर्न सकिन्छ।
सिम्बाल्टा र एफफेक्सोर बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग सेरोटोनिन र नोरेपाइनफ्रिन पुनःअपटेक अवरोधकर्ता (SNRI) सेरोटोनिन र नोरेपाइनफ्रिन पुनःअपटेक अवरोधकर्ता (SNRI)
जेनेरिक नाम के हो? Duloxetine भेन्लाफैक्सिन
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? मौखिक क्याप्सूल, विस्तारित-रिलीज मौखिक क्याप्सूल, विस्तारित-रिलीज
मानक खुराक के हो? 60 मिलीग्राम दैनिक एक पटक दैनिक एक पटक mg 75 मिलीग्राम
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्क र किशोरकिशोरीहरू वयस्क र किशोरकिशोरीहरू
शर्तहरू Cymbalta र एफएक्सोर द्वारा उपचार
Cymbalta एफडीए प्रमुख डिप्रेशनर डिसअर्डर (MDD) र सामान्यीकृत चिन्ता विकार (GAD) को उपचार गर्न अनुमोदित छ। यो फाइब्रोमाइल्जिया र मधुमेह न्यूरोपेथीको साथ साथै मांसपेशिहरु, कण्डरा, अस्थिबंधन, र हड्डीहरुमा सामान्य दुखाई को पीडा को उपचार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। सिम्बाल्टा कहिलेकाँही चिन्ताका अन्य विकारहरूको लागि अफ-लेबल प्रयोग गर्न सकिन्छ।
एफिएक्सोर एक्सआर एफडीएलाई प्रमुख डिप्रेशन डिसआर्डर (एमडीडी), सामान्यीकृत चिन्ता डिसअर्डर (जीएडी), सामाजिक चिन्ता डिसअर्डर (एसएडी), र पैनिक डिसऑर्डर (पीडी) को उपचारको लागि अनुमोदित गरिएको छ। कहिलेकाँही यसलाई ओब्सिटिभ-बाध्यकारी डिसऑर्डर (OCD), प्रिमेन्स्ट्रल डिस्फोरिक डिसअर्डर (पीएमडीडी), र दुखाइको उपचारको लागि अफ-लेबलको पनि प्रयोग गरिन्छ।
सर्त सिम्बल्टा ईफेक्सोर
सामाजिक चिन्ता विकार अफ-लेबल हो
के Cymbalta वा Effexor अधिक प्रभावी छ?
सिम्बल्टा वा एफफेक्सोरको प्रभावकारिता उपचार भइरहेको अवस्थामा निर्भर गर्दछ। धेरै थोरै अध्ययनहरूले सिम्बाल्टा र एफफेक्सोरलाई सीधा तुलना गरेको छ। जे होस्, जब प्लेसबोको तुलनामा, सिम्बाल्टा र एफफेक्सोर दुबै ठूला उदासीनता जस्ता स्थितिको उपचारका लागि अधिक प्रभावकारी हुन्छन्।
एउटा अध्ययनले धेरै क्लिनिकल परीक्षणहरू पत्ता लगायो र भेलाफ्याक्सिन राम्रो भएको पाए छोटो-अवधि उपचार विकल्प duloxetine भन्दा प्रमुख डिप्रेशन को लागी। इफेक्सोरको सक्रिय घटक भेन्लाफैक्सिनलाई पनि रुचाउन सकिन्छ, जसले छनौट सेरोटोनिन पुनःअपटेक इनहिबिटरहरू (एसएसआरआई) वा ट्राइसाइक्लिक एन्टिडप्रेससन्ट (टीसीए) को साथ प्रारम्भिक उपचारमा राम्रो प्रतिक्रिया जनाउँदैनन्। जबकि, अध्ययनले पत्ता लगायो कि duloxetine र भेलाफैक्साइन बीच प्रतिक्रिया र प्रतिक्रिया दर मा कुनै खास फरक छैन।
अर्को व्यवस्थित समीक्षा भेलाफ्याक्सिन, duloxetine, र अन्य antidepressants तुलना जस्तै paroxetine, फ्लुओक्सेटाइन, र फ्लुभोक्सामिन। अन्य विकल्पहरूको तुलनामा, भेलाफ्याक्सिन एक बढी प्रभावशाली एन्टीडिप्रेससन्टहरूमा एक फेला पर्‍यो। यद्यपि दुबै भेन्लाफैक्सिन र ड्युलोक्सेटीनलाई कम से कम सहन योग्य एन्टीडिप्रेससन्टको रूपमा वर्गीकृत गरियो, साइड इफेक्टको बारेमा।
एक स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस् जसले तपाईंको लागि उत्तम उपचार विकल्पको लागि मनोरोगमा विशेषज्ञ गर्दछ।
कभरेज र साइम्बाल्टा बनाम एफफेक्सोरको लागत तुलना
Cymbalta डिप्रेशन को लागी एक ब्रान्ड नाम प्रिस्क्रिप्शन ड्रग हो। जेनेरिक संस्करण, duloxetine, अक्सर चिकित्सा र बीमा योजनाहरु द्वारा कभर गरिएको छ। -० दिनको आपूर्तिको लागि, औसत खुद्रा मूल्य $ 470 भन्दा बढी गर्न सक्दछ। एकलकेयर सिम्बाल्टा कूपनको साथ, जेनेरिक संस्करणको लागि मूल्य १$ डलर बाट सुरु हुन्छ सहभागी फार्मेसीहरूमा।
ईफेक्सोर एक्सआर ट्याब्लेटहरू प्रिस्क्रिप्सनको साथ खरीदको लागि उपलब्ध छन्। जेनेरिक ईफेक्सोर एक्सआर ट्याब्लेटहरू अक्सर मेडिकेयर र बीमा योजनाहरू द्वारा आच्छादित हुन्छन्। लगभग $ १55 को औसत मूल्यको साथ, एफिएक्सोर एक्सआर सिम्बाटा भन्दा सस्तो छ। यद्यपि, एकलकेयरबाट एफफेक्सर एक्सआर कुपन प्रयोग गर्नाले मूल्यलाई अझ तल झार्न सक्छ। तपाईंको फार्मासिष्टलाई जेनेरिकको लागि सोध्नुहोस् र यसलाई लगभग $ १ for मा पाउनुहोस्।
मात्रा Tablets० ट्याब्लेटहरू Tablets० ट्याब्लेटहरू
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे $ 0– $ 89 $ ०– $ १
साइम्बल्टा बनाम एफेक्सोरको साझा साइड इफेक्टहरू
सिम्बाल्टाको सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरूमा मतली, टाउको दुखाइ, सुख्खा मुख, उदासी वा निन्द्रा, कब्ज, र थकान समावेश छ। सिम्बाल्टाले पखाला पखाला, भूख घटाउन, पसीना बढाउँदा, र पेट दुखाइ पनि हुनसक्दछ।
एफफेक्सोरको सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरू मतली, टाउको दुख्ने, सुख्खा मुख, कमजोरी, र उदासी हो। एफफेक्सोरले अनिद्रा, कब्ज, चक्कर, डائرिया, र भोक कम गर्न पनि सक्छ।
दुबै सिम्बाल्टा र ईफेक्सोरले सेक्स ड्राइभ (कामेच्छा) लाई कम गर्न पनि सक्छ। जे होस्, ईफेक्सोर कारणको रूपमा देखाइएको छ अधिक यौन रोग समस्याहरु Cymbalta भन्दा।
सिम्बल्टा र एफफेक्सोरको अन्य सामान्य साइड इफेक्टहरूको लागि तल तालिका हेर्नुहोस्।
सुख्खा मुख हो १%% हो पन्ध्र%
तन्द्रा हो १०% हो दुई%
कमजोरी हैन - हो दुई%
थकान हो %% हैन -
अनिद्रा हो %% हो दुई%
चक्कर हो %% हो १%%
भोक कम भयो हो %% हो *
पसिना बढेको हो %% हो १%
कामवासना घटाइयो हो %% हो %%
असामान्य दृष्टि हो %% हो %%
मुटुको धडकन हो दुई% हो दुई%
स्रोत: डेलीमेड ( सिम्बल्टा ), डेलीमेड ( ईफेक्सोर )
साइम्बाल्टा बनाम ईफेक्सोरको ड्रग अन्तर्क्रिया
साइम्बाल्टा र एफिएक्सोर मोनोमाइन अक्सिडेज इनहिबिटरहरू (MAOIs) जस्तै सेगिलिन र फिनेलिजिनको साथ प्रयोग गर्नु हुँदैन। सिम्बल्टा वा ईफेक्सोर एक MAOI बन्द गरे पछि १ days दिन भित्र प्रयोग गर्न मिल्दैन। अन्यथा, सेरोटोनिन सिन्ड्रोमको बढेको जोखिम छ, एउटा गम्भीर अवस्था जसमा आपतकालीन चिकित्सा उपचार आवश्यक पर्दछ।
त्यहाँ सेरोटोनिन सिन्ड्रोमको जोखिम पनि हुन सक्छ जब साइम्बल्टा वा एफिएक्सोर अर्को सेरोटोनर्जिक औषधिको साथमा लिइन्छ। सेरोटोनर्जिक ड्रग्सले सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इन्हिबिटर (एसएसआरआई) र ट्राइसाइक्लिक एन्टिडिप्रेसन्ट्स (टीसीए) समावेश गर्दछ। साइम्बल्टा वा एफफेक्सोरको साथ सेरोटोनर्जिक औषधिहरू प्रयोग गर्दा सावधानी अपनाउनुपर्दछ।
प्यारोक्सेटिन वा फ्लुओक्सेटीन जस्ता ड्रग्सले साइम्बाल्टाको मेटाबोलिज्ममा हस्तक्षेप गर्न र यसको रगतको मात्रा बढाउन सक्छ। यसले सिम्बाल्टाको साथ गम्भीर दुष्प्रभावहरूको जोखिम बढाउन सक्छ।
सिम्बाल्टा र एफफेक्सोर सावधानीका साथ प्रयोग गरिनु पर्दछ वा नन्स्टेरॉइडल एन्टी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स (एनएसएआईडीहरू) र एन्टिकोआगुलेन्ट्सबाट टाढा रहनु पर्छ। यी औषधिहरू सँगै प्रयोग गर्नाले रक्तस्रावको खतरा बढ्न सक्छ।
औषधि औषधि वर्ग सिम्बल्टा ईफेक्सोर
रासाजिलिन मोनोमाइन अक्सिडेज अवरोधकर्ताहरू (MAOIs) हो हो
फ्लुओक्सेटीन चयनित सेरोटोनिन पुनःअपटेक अवरोधकर्ताहरू (एसएसआरआई) हो हो
Nortriptyline Tricyclic antidepressants (TCAs) हो हो
सिम्बल्टा र ईफेक्सोरको चेतावनी
लिम्ब असफलता Cymbalta को प्रयोग संग रिपोर्ट गरिएको छ। ती व्यक्तिहरूमा मदिरा दुरुपयोग वा कलेजो डिसफंक्शनको साथ इतिहास हुन्छ, साइम्बाल्टालाई जोगिनु पर्छ। सिम्बल्टाको प्रयोग बन्द गर्नेहरू जो यकृत विफलताका लक्षणहरू विकास गर्दछ, जस्तै कि पौंधी।
सिम्बाल्टा वा एफफेक्सोरको प्रयोगले सेरोटोनिन सिन्ड्रोमको जोखिम बोक्छ, जुन मस्तिष्कमा सेरोटोनिनको अधिकता हुँदा हुन्छ। सेरोटोनिन सिन्ड्रोमका लक्षणहरूमा छिटो मुटुको दर, रक्तचाप बढेको, पसिना आउने, कम्पन, र ज्वरो हुन सक्छ।
सिम्बाल्टा र एफफेक्सरले रक्तचापमा बृद्धि हुन सक्छ। सिम्बल्टा वा एफफेक्सोरको साथ उपचारको क्रममा उच्च रक्तचापको इतिहासमा निगरानी गर्नुपर्छ।
साइम्बल्टा र ईफेक्सोर द्विध्रुवीय डिसअर्डर वा दौराको इतिहास भएका मानिसहरूलाई सावधानीका साथ प्रयोग गर्नुपर्दछ। यी एन्टीडिप्रेसन्ट्सले उन्माद, हाइपोमानिया, वा केहि व्यक्तिहरूमा दौरा गर्न सक्छ।
सिम्बाल्टा र एफफेक्सरको साथ सम्भावित अन्य चेतावनी र सावधानीहरूको लागि स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
सिम्बाल्टा बनाम एफफेक्सोरको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
सिम्बल्टा डुलोसेटिनको ब्रान्ड नाम हो। यो प्रमुख डिप्रेशन र चिन्ता विकारहरूको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ। यो मधुमेह न्यूरोपैथी र फाइब्रोमाइल्जियाबाट पीडाको उपचार गर्न पनि प्रयोग गरिन्छ। साइम्बाल्टा २० मिलीग्राम, mg० मिलीग्राम, वा mg० मिलीग्रामको विस्तारमा रिलीज क्याप्सुलमा उपलब्ध छ।
ईफेक्सोर भेन्लाफैक्सिनको ब्रान्ड नाम हो। यो प्रमुख डिप्रेशन डिसअर्डर, सामान्यीकृत चिन्ता विकार, सामाजिक चिन्ता डिसअर्डर, र पैनिक डिसअर्डरको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ। नियमित ईफेक्सोर बन्द गरिएको छ; जे होस्, एफफेक्सोर एक्सआर ट्याब्लेटहरू .5 37..5 मिलीग्राम, mg 75 मिलीग्राम, र १ 150० मिलीग्रामको शक्तिमा उपलब्ध छन्।
के सिम्बाल्टा र ईफेक्सोर एकै हो?
सिम्बाल्टा र एफफेक्सोर दुबै सेरोटोनिन र नोरिपाइनफ्रिन पुनःअपटेक इन्हिबिटरहरू (SNRIs) हुन्। तर ती उस्तै औषधि होइनन्। प्रमुख उदासीनता र चिन्ताको उपचारको साथसाथै, सिम्बाल्टा पनि एफडीए अनुमोदित हुन्छ केही प्रकारको स्नायु दुखाईको उपचार गर्न। अर्कोतर्फ, एफिएक्सोर एफडीएलाई आतंक आक्रमण र सामाजिक चिन्ताको उपचारको लागि अनुमोदित छ।
के सिम्बाल्टा वा ईफेक्सोर राम्रो छ?
राम्रो एन्टीप्रेससन्ट अवस्था र उपचारको अवस्थामा निर्भर गर्दछ र व्यक्तिले लिइरहेका अन्य औषधीहरूमा। भेन्लाफैक्सिन डिप्रेसनको लागि एक अधिक प्रभावी छोटो अवधि उपचार विकल्प हुन सक्छ। जे होस्, यसले यौन दुर्बलता जस्ता साइड इफेक्टको हिसाबले साइम्बल्टा भन्दा कम सहनशीलता पाउन सक्छ।
के म गर्भवती हुँदा सिम्बाल्टा वा ईफेक्सोर प्रयोग गर्न सक्छु?
कुनै निर्णायक अध्ययनले देखाएनन् कि सिम्बाल्टा वा एफफेक्सोर गर्भावस्थामा सुरक्षित हुन सक्छ। एक एन्टीडिप्रेसन्ट गर्भावस्थामा मात्र प्रयोग गर्नुपर्दछ यदि लाभहरू सम्भावित जोखिमहरू भन्दा बढी हुन्छन्। केहि अवस्थाहरूमा, सिम्बाल्टा वा एफेक्सोर गर्भावस्थामा डिप्रेसनका लक्षणहरू नियन्त्रण गर्न प्रयोग गर्न आवश्यक पर्दछ। गर्भवती हुँदा सिम्बाल्टा वा एफफेक्सोर प्रयोग गर्नु अघि चिकित्सा सल्लाहका लागि स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
के म सिम्बल्टा वा ईफेक्सोर मदिराको प्रयोग गर्न सक्छु?
Cymbalta वा Effexor लिने बेला ठिक्क मात्रामा मदिरा सुरक्षित हुन सक्छ। यद्यपि, सिम्बाल्टा वा एफफेक्सोरको साथ उपचार सुरू गर्ने बखत रक्सी पिउँदा बढ्दो चक्कर आउँछ वा निन्द्रा आउन सक्छ। उपचार सुरु गरेपछि केहि दिन नहोउन्जेल यो रक्सी पिउन बन्द गर्ने सल्लाह दिइन्छ।
त्यहाँ कुनै प्रमाण छैन कि एफफेक्सोरले मेमोरीमा सीधा असर गर्छ। ईफेक्सोर एक्सआरलाई हाइपोनाट्रेमियाको कारण भनेर चिनिन्छ, वा कम सोडियम स्तरहरू रगतमा, विशेष गरी यदि मूत्रवर्धक पनि लिइएको छ। Hyponatremia को लक्षण र लक्षणहरु मा टाउको दुख, भ्रम, र स्मृति बिरामी पर्छ। तपाईको डाक्टरले एफोक्सोर XR लाई रोक्न सिफारिश गर्न सक्दछ जब सम्म hyponatremia समाधान हुँदैन।
Cymbalta को लागी एक राम्रो विकल्प के हो?
सिम्बाल्टा एक छनौट सेरोटोनिन र नोरिपाइनफ्रिन पुनःअपटेक अवरोधकर्ता (SNRI) हो। अन्य SNRIs लाई एफेक्सोर (भेन्लाफैक्सिन), प्रिस्टीक (डेसेन्फ्लेक्सिन) , र सवेला (मिलनासिप्रान)। तपाईको लागि सम्भावित एन्टिडप्रेससन्ट उपचार विकल्पहरूको बारेमा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग कुरा गर्नुहोस्।
के तपाइँ पेप्टो बिस्मोल लिन सक्नुहुन्छ जब तपाइँ गर्भवती हुनुहुन्छ
एफफेक्सोर निकासी कति खराब छ?
गम्भीर वापसी लक्षणहरू रोक्न मद्दत गर्नको लागि एफफेक्सोरको डोज बिस्तारै टेपर्ड हुनुपर्दछ। एफफेक्सोरको अचानक विच्छेदनले मतली, चक्कर आउने, बान्ता गर्ने, दुःस्वप्न, चिडचिड, र टाउको दुख्ने जस्ता लक्षणहरू निम्त्याउन सक्छ। ईफेक्सोर निकासी लक्षणहरूमा प्यारेस्थेसियस, वा छालामा झुकावहरू पनि हुन सक्छ।
कहिले सम्म तपाइँ एक योजना बी गोली लिन सक्नुहुन्छ
मेलाटोनिन को धेरै 20 मिलीग्राम छ
एक राम्रो गैर उपवास ग्लुकोज स्तर के हो
एन्टीबायोटिक बिना स्वाभाविक रूप बाट uti बाट छुटकारा पाउनुहोस्
जन्म नियन्त्रण को लागी जेब बाट तिर्दै